I-studio epholileyo yokuhlala engalibalekiyo.
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguGuillaume
Isitudiyo, esikumgangatho wokuqala wendlu yentsapho, kukuhamba ngemizuzu emibini ukusuka elunxwemeni. Kwabo banqwenela ukutyelela isiqithi ngokukhwela ibhasi, indawo yokumisa ikufuphi nekona. Bonke abahambi bamkelekile. LGBT friendly.
I-studio, ekumgangatho wokuqala wendlu yentsapho, inomnyango ozimeleyo (ufikeleleka ngezitebhisi), ikhitshi elincinci, igumbi lokuhlamba, indlu yangasese kunye ne-balcony. Abahambi baya kuxhamla kukufikelela kwi-Wi-Fi, kwaye baya kuba nefriji, i-oven microwave, iayini, isixhobo sokomisa iinwele kunye nekiti yoncedo lokuqala.
4.84 ·Izimvo eziyi-83
IAlbion yilali encinci eselunxwemeni ekwintshona yesi siqithi. Abahambi baya kufumana kufutshane (kuphela malunga nemizuzu emibini ukuya kwemihlanu yokuhamba), iivenkile ezinkulu, iindawo zokutyela (eAsia, isiFrentshi kunye neMauritian), ikhemesti kunye nomatshini wokuthengisa phakathi kwabanye. Ngokungathandabuzekiyo uya koyiswa kuhambo olude elunxwemeni ukuze uthande ukutshona kwelanga okuqaqambileyo.
Siya kubamkela ngovuyo olukhulu abo banqwenela ukwabelana ngokutya okuqhelekileyo kwaseMauritiya kwinkampani yethu amaxesha ngamaxesha. Sifumaneka kakhulu kwaye sivuleleke ekwabelaneni.